Fleksy gafere n'aka Pinterest | Gam akporosis
Fleksy bụ kiiboodu maka gam akporo na iOS na nso nso a anyị amabeghị ihe dị ukwuu nke, ewezuga ya ịghọ n'efu. Fọdụ kwudịrị na ndị mmepe ahụ ahapụla ngwa ahụ yana ihe na-adịghị mma ga-eme ka anyị ghara ịma mmelite ọ bụla. Ọ bụkwa ihe anyị ji ọtụtụ oge na ngwa ndị ọzọ, yabụ ọ bụghị ihe ijuanya ma.
Mana ezigbo ihe kpatara nke a "oge efu" bụ na Fleksy emesịa gafere n'aka Pinterest. Ebe ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ala, azaghị ozi email na akaụntụ Twitter enweghị mmelite ọ bụla, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ihe na-eme, mana opekata mpe ihe niile ekpochapụrụ ma onye ọ bụla dị jụụ. Ndị otu dị n'azụ Fleksy abụrụla akụkụ nke Pinterest site taa.
Ahụigodo ahụ nwere ezigbo onye ọrụ N'ihi ụfọdụ omume ọma ya dị ka ụzọ kọmpat iji dee mmegharị ahụ, GIFs na mgbakwunye ya dị iche iche, gbakwunye ihe bụ ụzọ ike ahụ iji gbazie okwu ndị edere, ọ ga-aga na netwọkụ mmekọrịta ahụ lekwasịrị anya na onyogho na mbadamba.
Ihe ga - eme na keyboard bụ na ugbu a ọ ga - anọgide na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ ezie na mmasị Pinterest nwere na ọkwa ya otu ndị na - ahụ maka ịhazi nnukwu keyboard ka amabeghị. Mgbanwe doro anya maka Fleksy bụ na ugbu a ụfọdụ akụkụ ya ga-aghọ isi mmalite, yabụ ndị mmepe nke atọ nwere ike ịgụnye akụkụ nke atụmatụ ya na ihe okike ha.
O doro anya na Fleksy ugbua agaghi enwe mmelite ozo na nkwado a ga-agbahapụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ kiiboodu nwere ụdị ọhụụ, ị nwere ike ilele nhọrọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ dịka Keyboard Android ma ọ bụ SwiftKey.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Fleksy azụrụla Pinterest
Jide mara ọkwa Remix Pro mbadamba, Remix mini PC na Acer laptọọpụ, niile na-agba ọsọ Remix OS 3